नवलपरासी, २७ चैत । नेकपा एमाले देबचुली नगरकमिटीको पार्टी कार्यलय, एक कार्यक्रमका बीच शनिबार उद्घाटन भएको छ ।
देबचुली नगरपालिकाको दुम्कौलीचोकमा नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य तिलक महतले पार्टी कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् । आसन्न स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी पार्टी कार्यालय स्थापना गरेको एमाले देबचुली नगर अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
सुरक्षितको सहकारी प्रशिक्षण सम्पन्न
चितवन, २७ चैत । पूर्वी चितवनको कालिका–६, खोलेसिमलमा रहेको सुरक्षित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आयोजनामा शनिबार सहकारी प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष द्रोणप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा शिक्षा उप–समितिका संयोजक रामकृष्ण लम्साल, संस्थापक अध्यक्ष श्यामन्तकमणि लामिछाने, सल्लाहकार संयोजक ईश्वर तिवारी, उपाध्यक्ष शितलकाजी श्रेष्ठ, सचिव हरि भण्डारी लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
प्रशिक्षण कार्यक्रमा सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय भरतपुरका सहकारी निरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीको सिद्धान्त, सेयर सदस्यको काम, कर्तव्य, अधिकार, सहकारी ऐन नियम सम्बन्धि व्यवस्था, ऋण लगानी र असुलीलगायतका विषयमा प्रशिक्षण गराएका थिए ।
निजी अस्पतालमा पुन कुवँर
चितवन, २७ चैत । निजी अस्पताल समन्वय समिति भरतपुरमा पुन नारायणसिं कुवँर अध्यक्ष चयन भएका छन् ।
समितिको तेश्रो साधारणसभाले कुवँरको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरेको हो । समितिको उपाध्यक्षमा ओमप्रकाश दवाडी, सचिवमा विक्रम अधिकारी, सहसचिवमा हरि भुषाल र कोषाध्यक्षमा विष्णु कुवँर रहेका छन् ।
समितिका अध्यक्ष कुवँरको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारणसभाको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विजयकुमार झाले उद्घाटन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा समितिका उपाध्यक्ष पुष्प धिताल, उवासंघ चितवनका अध्यक्ष राजन गौतम, चितवन उद्योग संघका उपाध्यक्ष त्रिलोचन कडेँल, चितवन मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पताल निर्देशक दयाराम लम्साल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
पत्रिका बितरकलाई सम्मान
रत्ननगर, २७ चैत । रत्ननगर क्षेत्रमा कार्यरत तीन जना पत्रिका बितरकलाई शनिबार एक कार्यक्रमबीच सम्मान गरिएको छ ।
रत्ननगर ११ मा रहेको चेपाङ संरक्षण केन्द्रले पत्रिका वितरणमा लामो समयदेखि क्रियाशील राजेन्द्र घायल, मेघनाथ त्रिपाठी र तुलसी अधिकारीलाई सम्मान गरेको हो ।
कार्यक्रमा समाजसेवी पुरु खनाल र केन्द्रका अध्यक्ष कपिलप्रसाद शर्माले उनीहरुलाई टीका लगाई सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए । उनीहरुले बिगत १४ वर्षदेखि स्थानीय र राष्ट्रिय पत्रिका वितरण गर्दै आएका छन् ।
कार्यक्रममा पुरु खनाल, मुरलीप्रसाद गजुरेल, प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सदस्य शिशिर सिंखडा, पत्रकार महासंघ कतार शाखाका पूर्व अध्यक्ष रवि रोशीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा समाजसेवी मुरलीप्रसाद गजुरेलले केन्द्रमा आश्रित बालबालिकालाई खाना खुवाउन ३६५ दिने अभियान अन्तर्गत एक दिनको खानाबापतको रकम नौ हजार सहयोग गरेका थिए ।
निर्माणकर्मी सहकारी संस्थाको अध्यक्षमा न्यौपाने
चितवन, २७ चैत।
निर्माणकर्मी सहकारी संस्था भरतपुर–१२ को अध्यक्षमा नारायणप्रसाद न्यौपाने चयन भएका छन् । शनिबार आँपटारीमा सम्पन्न प्रारम्भिक साधारण सभाले न्यौपानेको नेतृत्वमा ९ सदस्यिय नयाँ समिति चयन गरेको हो । समितिको उपाध्यक्षमा नारायण वंशी, सचिवमा प्रकाश पौडेल र कोषाध्यक्षमा टेकबहादुुर गुरूङ (सन्तोष) चयन भएका छन् । आगामी तीन वर्षे कार्यकालका लागि चयन भएका समितिका सदस्यहरूमा विगेन्द्र कर्ण, अजुन तामाङ, हरिनारायण चौधरी, पशुपति चौधरी र गोविन्द खनाल सर्वसम्मत चयन भएका हुन् ।
यस्तै संस्थाको सोही सभाले शनिबारै तीन सदस्यिय लेखा समिति समेत चयन गरेको छ । रामजी पण्डितको संयोजकत्वमा अर्जुन नेपाल र नन्दलाल तामाङ सदस्यm रहने गरी लेखा समिति चयन गरिएको संस्थाले जनाएको छ ।
बार्सिलोना फयानहरुको भेला
भरतपुर । फुटवल क्लव बार्सिलोनाका फ्यानहरुको भेला शनिबार भरतपुरमा सम्पन्न भएको छ । सो भेलामा वार्सिलोना फुटवल क्लवका समर्थकहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । समर्थकहरु लियोनल मेसीको नाम र जर्सी नम्बर अंकित टिसर्ट लगाएर कार्यक्रममा उपस्थित भएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै अतिथि खेलकुद पत्रकार मंच चितवनका महासचिव दिपेन्द्र अधिकारीेले बाहिरी देश र क्लव तथा खेलाडीका फुटवल समर्थकहरुको एकता राम्रो पक्ष भएपनि नेपाली फुटवल र खेलाडीलाई विर्सन नहुने बताए ।
कार्यक्रममा बार्सा फुटवल क्लव काठमाडौंका कोषाध्यक्ष मनिष श्रेष्ठ, पोखराका अध्यक्ष अशोक वराल, साजन अधिकारीलगायतले क्लवको आवश्यकता र औचित्यबारे स्पष्ट पारको थिए । साथै चितवनमा क्लव गतिविधि अघि वढाइरहेका कुशल लामिछानेले विभिन्न सामाजिक काममा आफूहरु लाग्ने समेत बताए ।
भीमोदयले वार्षिकोत्सव मनाउँदै
चितवन, २७ चैत । कालिका नगरपालिका वडा नं. ५ पदमपुरमा रहेको भीमोदय उच्चमा.वि.ले आफ्नो ४६औं वार्षिकोत्सव भव्य रुपमा मनाउने भएको छ ।
२०२७ सालमा स्थापना भएको विद्यालय पदमपुर स्थानान्तरणसँगै २०५९ सालमा नयाँ पदमपुरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । १२ सय १६ जना विद्यार्थी रहेको विद्यालयमा पाँच कक्षासम्म अँग्रजीमा ध्यममा पढाई हँुदै आएको छ ।
विद्यालयको ४६ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा पूर्व शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल प्रमुख आतिथिको रुपमा उपस्थित हुँदैछन् । विद्यालयद्वारा शनिबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमृत श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष नारायणबहादुर भट्टराई, शिक्षक–अभिभावक संघका अध्यक्ष उत्तरकुमार अधिकारी लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
राज्यमन्त्रीद्वारा अस्पतालको प्रशंसा
चितवन, २६ चैत । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तारामान गुरुङले भरतपुर अस्पतालको सेवालाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
जनताको अस्पतालको रुपमा चिनिएको भरतपुर अस्पतालको सेवाको प्रसंशा गर्दै राज्यमन्त्री गुरुङले अस्पतालको सुदृढीकरणका लागि डेढ करोडको सहयोगको घोषणा गरेका छन् । भरतपुर अस्पतालको ५४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै प्रमुख अतिथि गुरुङले अस्पतालको बहिरङ्ग भवनको विकास र मर्मतका लागि मन्त्रालयले सहयोग गरेको बताए । उनले अस्पतालको सेवालाई जनमैत्री बनाउन आग्रह गरे ।
अस्पतालका अध्यक्ष राजकुमार राजभण्डारीले नमूना अस्पताल बनाउन आफू लागिपरेको बताए । उनले यस अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा विकास गर्न राज्यमन्त्री गुरुङलाई आग्रह गरे । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सेवा बिस्तारको योजना बनाइने बताए ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीले केन्द्रीय अस्पताल नहुँदा सेवा भनेजस्तो बिस्तार गर्न नसकेको बताए । अस्पतालको योजना सुनाउँदै डा. मरासिनीले अस्पतालमा एमआरआई सेवा, न्यूरो सर्जरी सेवाको सुरुवात, ट्रमा सेन्टरलाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्ने तयारी रहेको बताए ।
सांसद विष्णुमाया परियारले जनताको स्वास्थ्य सेवामा सधैं मुस्कानसहित सेवा दिन आग्रह गरिन् । अस्पताल बिरामीको मन्दिर भएको भन्दै उनले बिरामीसँग नम्र रुपमा प्रस्तुत हुन अनुरोध गरिन् । कार्यक्रममा अस्पतालका पूर्वमेसु डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठलाई उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । यसैगरी, उत्कृष्ट सेवा गरेवापत हाल कार्यरत र सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठ, नेकपा एमाले चितवनका सचिवालय सदस्य अरुण पीडित भण्डारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष बद्रि तिमिल्सीना, चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट, नेपाल चिकित्सक संघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. ढुण्डीराज पौडेल, उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष राजन गौतम, अस्पतालका चिकित्सक डा. मनोज कँडेल, नर्सिङ प्रशासक सरिता कार्की लगायतले बोलेका थिए ।
निर्वाचनलाई कुनै शक्तिले पनि रोक्न नसक्ने ः वादल
चितवन, २७ चैत । नेकपा माओवादी केन्द्रका संगठन विभाग प्रमुख रामबहादुर थापाले स्थानीय निर्वाचनलाई कुनै शक्तिले पनि रोक्न नसक्ने दावी गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्र रत्ननगर–१२ को वडा भेला तथा सुकुम्बासीहरुको लागि सामुदायिक भवन शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी जहिले पनि जनताको अधिकार स्थापित गर्न तत्पर रहेको बताए ।
वाड अध्यक्ष जनक वरालको अध्यक्षता सम्पन्न भेलामा सूर्य सुवेदी, कञ्चन खनाल, संगिता भट्टराई, राजु अमगाई, ओम लामिछाने लगायतले बोलेका थिए ।
भेलाले भिमसेन पौडेलको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय नयाँ वडा कमिटी पनि गठन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षमा विष्णु वराल, सचिवमा उमेश कोईराला, सहसचिवमा चन्द्रकला पनेरु, कोषाध्यक्षमा सुशील तिवारी रहेका छन् ।
वडा नम्बर छको कार्यालय उद्घाटन
चितवन, २६ चैत । पूर्वी चितवनको पर्सामा नेकपा एमाले खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर छको वडा कार्यालय शुक्रबार उद्घाटन गरिएको छ ।
एमालेका केन्द्रीय वैकल्पिक सदस्य कृष्ण खनालले वडा कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश कमिटी सदस्य जेएन थपलियाले स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले खैरहनी नगरपालिकामा गरेको विकास निर्माणको कामलाई माओवादीका कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीले गरेको भन्दै गलत प्रचार गरिरहेको बताए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि एमालले बैशाख १० देखि १२ गतेसम्म सबै तहको उम्मेदवार टुङ्गो लगाइसक्ने बताए ।
नेकपा एमाले खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर छका अध्यक्ष अशोक ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्यहरु हिराबहादुर गुरुङ, घनश्याम कँडेल, जिल्ला कमिटी सदस्यहरु झगरु चौधरी, दुर्गा अर्याल, वैकल्पिक सदस्य केशव कँडेल, लेखा कमिटी उपाध्यक्ष रामशरण पाण्डे लगायतले बोलेका थिए ।